အညောင်းမိလို့ ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ တကိုယ်လုံး နာကျင်ကိုက်ခဲ နေသူများအတွက် ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း - Myanmar Red News
လက်တွေ့ ဆေးစွမ်း ကောင်းလေး မျှဝေပေးပါရစေ..။အညောင်းမိလို့ ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ တကိုယ်လုံး နာကျင် ကိုက်ခဲ နေသူများ…။ ရာသီ ပေါ် အညောင်းမိ တုတ်ကွေး ဖျားနာ ခံစားနေရသူများ…။ဤ ပုံပါ အပင်ကို အရွက် အမြစ်မကျန် ပြု တ်သောက်ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်…။
အပင်နာမည်က. သံမနိုင်ကျောက်မနိုင်ပင်ခေါ် တောမြေပဲပင် ပါ။ ဒေသအလိုက် အခေါ်ဝေါ် ပြောင်းနိုင်ပါသည်…။ နောက်ထပ်.. ကျောက်ကွဲပင်လို့လဲ ခေါ်ပါသေးသည်…။ ဆီးကျောက်တည် နေသူများ သောက်ပေးပါက. ကျောက်ကွဲကြေစေပြီး. ပျောက်ကင်းနိုင်သည်ဟူ၏..။ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်…။ ဘေးဘယာတွေ ဝေးကွာကြပါစေ…။
အညောငျးမိလို့ ထိုငျးမှိုငျးနသေူမြား တကိုယျလုံး နာကငျြကိုကျခဲ နသေူမြားအတှကျ ကိုယျတှဆေ့ေးနညျး
လကျတှေ့ ဆေးစှမျး ကောငျးလေး မြှဝပေေးပါရစေ..။အညောငျးမိလို့ ထိုငျးမှိုငျးနသေူမြား တကိုယျလုံး နာကငျြ ကိုကျခဲ နသေူမြား…။ ရာသီ ပျေါ အညောငျးမိ တုတျကှေး ဖြားနာ ခံစားနရေသူမြား…။ဤ ပုံပါ အပငျကို အရှကျ အမွဈမကနျြ ပွု တျသောကျခွငျးဖွငျ့ ပြောကျကငျးနိုငျပါသညျ…။
အပငျနာမညျက. သံမနိုငျကြောကျမနိုငျပငျချေါ တောမွပေဲပငျ ပါ။ ဒသေအလိုကျ အချေါဝျေါ ပွောငျးနိုငျပါသညျ…။ နောကျထပျ.. ကြောကျကှဲပငျလို့လဲ ချေါပါသေးသညျ…။ ဆီးကြောကျတညျ နသေူမြား သောကျပေးပါက. ကြောကျကှဲကွစေပွေီး. ပြောကျကငျးနိုငျသညျဟူ၏..။ မိမိတို့ ကိုယျတိုငျ လကျတှဖွေ့ဈပါသညျ…။ ဘေးဘယာတှေ ဝေးကှာကွပါစေ…။
ငွေကုန်ကြေးကျနည်းတဲ့ အဆုပ်သန့် ဆေးနည်းလေး